Home Ulo oru Europe Allan Saint-Maximin Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Allan Saint-Maximin Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu site na Lifebogger. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter na Instagram
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "Saint Max“. Akụkọ banyere nwata anyị gbakwunyere akụkọ banyere eziokwu banyere ndụ ya na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị pụtara ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ebili nke Allan Saint-Maximin. Ebe E Si Nweta Foto: ChronicleLive, 90Min, Twitter na GetFootballNewsFrance
Ee, onye ọ bụla maara na Saint-Maximin bụ ihe dị iche, nkịta n ’igbe nke ije, nkà na aghụghọ dị n’ọhịa na-eme ndị na-egwu bọọlụ obi ụtọ. Agbanyeghị, naanị mmadụ ole na ole na-atụle Allan Saint-Maximin's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Nzụlite ezinụlọ na Ndụ mbu
Malite, aha ya zuru oke Allan Irénée Saint-Maximin. Amụrụ ya na 12th ụbọchị nke March 1997 nye nne ya, Nadège Saint-Maximin, na nna Alex Saint-Maximin na Châtenay-Malabry, onye isi na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke Paris, France.
Dị ka ụmụnna ya; Thomas Lemar, Thierry Henry, Dimitri Payet na Kingsley Coman, Onye Fada na-bụ nke Agbụrụ agbụrụ France Guianese Creole ya na ezinụlọ ezinụlọ Carribean na South America. N'agbanyeghi na amuru ya na France, Saint-Maximin nwere ezinulo ya site na obodo Guyana (akuku nne ya) na Guadeloupe (akuku nna ya).
Bornmụrụ ndị nne na nna bara ọgaranya nyere Saint-Maximin mmalite ndụ. O toro n’ezinaụlọ dị elu wee nwee ntụsara ahụ dịka nwatakịrị. Ndị nne na nna Allan Saint-Maximin nwere agụmakwụkwọ ego kachasị mma ma ọ dịghị mgbe ị ga-agbaso ụgwọ. Ị maara?… Mama ya nwere ikike 'otu mgbe'onye nhazi akwukwo'n'ụlọ akwụkwọ a ma ama dị na Paris Suburbs mgbe nna ya Alex na-arụ ọrụ dị ka onye na-elekọta ọfịs na Mahadum Paris Diderot nke dị na Paris, France. Ndị nne na nna zụlitere ụmụ ha na nkwanye ùgwù n'okpukpe okpukpe nke Ndị Kraịst.
Afọ Ndị Mbụ: A zụlitere Allan Saint-Maximin dịka ọdụdụ nke ụmụ atọ. O nwere nwanne nwoke nke okenye aha ya bụ Kurtys na nwanne nwanyị nke aha ya ka amabeghị n’oge edere ya. Na-etolite n'obodo Meudon, Saint-Maximin na-eto eto malitere ịgba egwu na ejiji dịka ihe ntụrụndụ. Fashionzọ ndụ ahụ mere ka o nwee atụ dị mkpa maka isi eji eme isi, ihe na-aga n'ihu na-adị.
Lanhụnanya Allan Saint-Maximin maka ịkpụ isi abụghị ihe ọhụrụ. Foto nwata ya kwuru ihe niile. Ebe E Si Nweta: DailyMail
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ndị nne na nna Saint-Maximin na ndị nkuzi ụlọ akwụkwọ nyere ya ụkpụrụ niile achọrọ iji mee ka ọ dịkwuo elu mgbe ọ na-etolite. Laa azụ n'oge ahụ dị ka obere nwa akwụkwọ, Alban nyere ya 10 euro oge ọ bụla ọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ. O mefuru ego ịzụta swiiti ma kwado ndị enyi ya nọ na mkpa (Ihe ịrịba ama nke mmesapụ aka ya n'oge). Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, achọtara talent nke Saint-Maximin na egwuregwu na football wee nwee ike ịbanye na ya n'onwe ya na-enweghị onye nchịkwa ma ọ bụ onye ndụmọdụ. N'ikwu okwu banyere nke ahụ, o kwuru otu oge;
“Nkà m batara na nke m. Ana m agba bọl ebe niile, n'ụlọ akwụkwọ, n'ụlọ, wdg. M na-agba bọl n'oge niile n'agbanyeghị agbanyeghị ọzụzụ. Ọ bụ usoro nke m, dịka m chọrọ ya. A kụziiri ije ije m na uso m. ”
N'etiti nhọrọ egwuregwu niile, Ọ bụ egwuregwu bụ onye bịara nye ekele maka ebumpụta ụwa ya maka ịgba ọsọ nke kemgbe ọ bụ nwata. Mgbe e mesịrị, ọ tinyere n'egwuregwu Athletic na Football ma ọ malitere nwanne ya nwoke nke okenye, Kurtys onye chọrọ ịgba bọlbụ n'oge ahụ. Na mbido, Saint-Maximin tụkwasịrị obi na nkà ya, mmepe nke mere ka o kwenye na ya nwere nkà ịga ọkachamara.
Tagkpado ya na nwanne ya nwoke, ọrụ ozi nke Saint-Maximin ghọrọ nke ya ka ọ mụta otu esi eji bọl bọl eme ihe ndị dị egwu. O mere nke ahụ niile n'aha ịpụ iche site na ụmụ nwoke nọ na agbata obi ya - ebe ebe enwere ohere ịgba bọọlụ. Inbọchị na-apụ ụbọchị, onye France bidoro ịkwụwa nka na ahịhịa. Saint-Maximin na ụmụ nwoke gbara afọ nke nwanne ya nwoke (afọ abụọ ma ọ bụ atọ).
-Gba ọsọ pụrụ iche nke Saint-Maximin tinyere aka nka drib hụrụ ya n'anya karịa ụmụ nwoke ndị ọzọ nọ n'agbata obi ya. Onye na-agba bọọlụ n'okporo ụzọ bụ onye ekpuchichiri enweghị nke ọma ịnweta ohere maka ule ya na Verrières-le-Buisson, onye otu ọgbakọ. 34 min mbanye na 10.8km si n'ụlọ ezinụlọ ya. Oge ahụ umu nwoke abuo (Kurtys buru onye mbu) nwechara ihe diri na agụmakwụkwọ, ọ joyụ nke Saint-Maximin N'ezie, ndị ezinụlọ ezughị oke.
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Ndụ Ndụ Mmalite
Dị ka onye na-eto eto, Saint-Maximin mụrụ azụmaahịa ya na klọb ndị ntorobịa Verriere-le-Buisson ọnwa ole na ole tupu ọ gafere na klọb ọzọ, US Ris-Orangis nke bụ ihe ọzọ 55 min mbanye / (34.5 km) site n'ụlọ ezinaụlọ ya na Meudon. N’ụlọ klọb ahụ, mmadụ abụọ gụrụ ya lekọtara ya, Jean-Louis Lessard na Didier Demonchy. Saint-Maximin na-egwuri egwu n'okpuru tutelage onye nkuzi ya Frédéric Ferreira n'oge mkpụrụ 3 afọ ya.
Dị ka ọtụtụ ga-atụ anya, o bidola ịmalite ọrụ ya. Saint-Maximin nwere obi uto nke ukwuu na-ekiri n'ihi ngosipụta ya mgbe niile ijeụkwụ gị na nkà gị. Nke a gosipụtara ka ọ na-aga n'ihu na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nwere nzube French nke aha ya bụ ACBB (Athletic Club de Boulogne-Billancourt) na 2007.
ACBB abụghị naanị ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, mana akara egwuregwu ebe ndị nne na nna niile chọrọ ịdebanye aha ụmụ ha. Nke a bụ n'ihi na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a nwere aha ọma maka itinye ndị na-egwu egwuregwu ya na klọb French kachasị elu. Hatem Ben Arfa, Yacine Bammou, ka a kpọọ aha mana ole na ole gafere na klọb ahụ.
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Ụzọ Ebube
Ka Saint-Maximin na etolite wee di ntorobịa, o bidoro nro nke egwuri egwu n’ime Premier League. Laa azụ n'oge ahụ, nwata nwoke France ga na-ele nke Arsenal Thierry Henry ụbọchị niile na telivishọn.
Na-arụ ọrụ maka nrọ ya, kpakpando ahụ na-eto eto nọgidere na-eme ihe ọ kacha eme mgbe niile na egwu egwuregwu. na-ekwuputa onwe ya na nbughari ya na ije ije n'uzo puru iche. N’ịkọwapụta ịdị iche ya n’etiti ụzọ abụọ, Saint-Maximin kwuru otu oge;
“N'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, ha na-azụ, otu emetụ, mmetụ abụọ. Onye ọ bụla hụrụ na a zụlitere m n'ụzọ dị iche. Agụrụ m nke ukwuu wee gwa m ka m kpọọ ụmụ nwoke ndị toro eto ma dị ike. Amụtara m otú e si eti ha ihe, n'otu oge ahụ, a na-agba aviod ka ọ na-achị ha ”
Onye nkuzi ya n’oge ahụ, Guillaume Sabatier, wuru ndi otu ya na ya. N’egwuregwu asọmpi mbụ ya, Allan Saint-Maximin gosipụtara echiche site n’ịgba ihe mgbaru ọsọ 8. N'ịlele otu ihe dị egwu n'oge ọ bụ nwata, ọ nwere aha ọma n'etiti ndị na-ewe ndị ọrụ na France niile. N'oge na-adịghị anya, Saint-Maximin mere mkpebi kachasị ukwuu nke ọrụ agụmakwụkwọ ya site na isonye na Saint-Étienne, klọb nke nyere ya ụzọ nchebe maka ịga ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na afọ 2013.
At Saint-Étienne B, Saint-Maximin ghọrọ otu n'ime ndị na-egwu egwuregwu ha na-enwu enwu, mmepe nke rụpụtara ya ọkpụkpọ mba nke French. O bu ihe nwute, inwe ogba n’ime ndi otu ndi otu egwuregwu ahughi ka onye okacha-amara nke ndi France na-enweta oge eji egwu ha. Nkwaga na Monaco arụghị ọrụ dịka Saint-Maximin enweghị ike ịnọ ọdụ Bernardo Silva, Anthony Martial na João Moutinho ndi nọ n'ike nke ike ha.
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Bilie na-ewu ewu
Kwaga na ego na Sporting Club Bastiais ghọrọ usoro a tụkwasịrị obi kachasị maka Saint-Maximin, nke anaghị akwụchaghị BUT kwenye Nice ka ọ bịanye aka na Monaco n'oge ọkọchị nke 2017.
Na Nice, Saint-Maximin bidoro imezigharị ihe siri ike, bụrụ onye na-eme egwuregwu maka ndị klọbị n'okpuru Patrick Viera. Ihe o mere maka klọb ahụ dọtara onye isi nchịkwa Newcastle United Bruce bụ onye nọ na-achọ onye ga-eme ihe ga-atọ ndị fans ya ụtọ, na-eme ka ha si n'oche ha pụọ.
Emechara ka nrọ nke Premier League nke Saint-Maximin mgbe ọ sonyere Newcastle na 2nd nke August 2019. Ngwa ngwa n'ime oge 2019 / 2020, onye na-eme egwuregwu bọọlụ nke nwere onwe ya na-acha odo odo, spiky dreadlocks malitere ndị egwu na-atọ ụtọ. Saint-Maximin nwetara obi ndị na - agbachitere Premier League na-agba ọsọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu.
Allan Saint-Maximin ghọrọ ndị ọkacha mmasị ọkachasị nke mbụ Premier League oge. Ebe E Si Nweta Foto: DailyMail
Oge ọ bụla Saint-Maximin nọ na bọọlụ, ị mara ihe ọ ga-eme- gbagọrọ agbagọ, tụgharịa, feint, swerve, dribble ndị na-emegide ya gara aga ma na-aga n'ihu na bọlbụ dị n'ụkwụ ya. Himkwụsị ya bụ okwu ọzọ kpamkpam dị ka egosiri site na mpempe vidiyo dị n'okpuru.
Na-ekiri vidiyo dị n'elu, ị ga-ekwenye na Saint-Maximin bụ, na-enweghị mgbagha, 'Azụ ' ke ekebe. Na-eche echiche iji aghụghọ ya na aghụghọ ya (n'ọchịchịrị ya na nke oji), winger dị ike nwekwara oke ume dị mkpa iji mee ka ọpụpụ talismanic. N'okpuru bụ mpempe ihe akaebe vidiyo.
N’oge a na-ede akwụkwọ, o doro anya na Saint-Maximin bụ onye ọkpụkpọ kachasị mkpa na ndị otu Newcastle na otu n’ime ndị egwuregwu kachasị akpali mmasị ilele na Premier League. Obi abụọ adịghị ya, ndị egwuregwu bọọlụ buru ibu nọ n'ọnụ ọgụgụ nke ịhụ nwa ntorobịa na-agba agba n'ime amara klaasị nọ kpọmkwem n'anya ha. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ama, o doro anya na ọtụtụ ndị na - achọ ihe nkiri Newcastle tụgharịrị uche ma Allan Saint-Maximin alụọla nwanyị ma ọ ka nwere nwunye ya ma ọ bụ nwee enyi nwanyị. EE! Enweghị agọnahụ eziokwu ahụ na anya mara mma ya na ụdị egwuregwu ya ga-etinye ya na ndepụta nke ndị chọrọ ịlụ nwanyị chọrọ.
Dabere na WTFoot, onye France kwuru na ọ na-eme enyi nwanyị aha ya bụ Margaux gburugburu 2015, n'oge ya na klọb German (Hannover 96). Dabere na akụkọ, Margaux (nke a na-ese foto n'okpuru) bụzi enyi nwanyị ochie ya.
Allan Saint-Maximin kwuru na ya na Margaux na-emekọ ihe. Ebe E Si Nweta Foto: WTFoot
N'oge edere, Allan Saint-Maximin ji ụmụ nwanyị abụọ mara mma (Lyana na Ninhia) gọzie Allan Saint-Maxin. Dịka a hụrụ n'okpuru, ihe mkpuchi pụrụ iche na ntutu isi ụmụ nwanyị bụ ngosipụta dị ọcha nke onyinyo na ụdị nna ha. Foto foto dị n'aka nri mara mma Lyana (n'aka ekpe) na Ninhia (n'aka nri) ka ha na-anụ ụtọ nkasi obi dị mma nke nna ha ukwu.
Zute ụmụ nwanyị Allan Saint-Maximin- Lyana na Ninhia. Ebe E Si Nweta Foto: Nkọwapụta
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Ndụ nke Onye
Tomata Allan Saint-Maximin Ndụ nke Onwe ya pụọ ​​na njakịrị ya niile na aghụghọ ya ga-enyere gị aka ilele ụdị onye ọ bụ.
Na-amalite apụ, ebe ahụ bụ n'ezie ihe dị ukwuu n'anya ya karịa nkà ya, ihe ịchọ mma na aha mmebe. Ee !, ị nwere ike iche na ọ bụ nanị flas. Mana Saint-Maximin bụ onye isi mara mma na onye nkịtị maara ihe ọ na - eme; na-ebute ndị ọzọ ụzọ n’onwe ya. Mgbe ya na BBC na-ekwu okwu, Saint-Maximin mere ka ụwa mara banyere ọchịchọ ya ime ihe niile na egwu, na-atọ ndị ọchị ọchị, nyere ndị otu egwuregwu ibe gị aka ọ bụrụ na ọ baghị akara mgbaru ọsọ. N'okpuru bụ mpempe ihe akaebe vidiyo.
Ihe dị ka otu ọnwa mgbe ọ sonyeere Newcastle, ndị egwuregwu England North East jiri ịhụnanya gosipụta ụzọ nke ịkwanyere onye isi kpakpando ha ugwu - mmepe nke mụrụ cha cha. Saint-Maximin nwere abụ a ma ama na aha ya - nke a na-abụ abụ ọ bụghị naanị n'oge egwuregwu kamakwa ebe niile gụnyere klọb. Gee ya nti n'okpuru;
Nye ọtụtụ ndị egwu bọọlụ, ịnwe ọkpụkpọ na-enye ọerụ ma na-akpali akpali dị ka Saint-Maximin n'ọgbọ a bụ ihe mara mma ile anya. Ọ bụ, n'enweghị obi abụọ, onye nwere mmasị, onye ndị nne na nna Newcastle chọrọ ka ụmụ ha toomi mgbe ha toro. Saint-Maximin enwetala nsọpụrụ dị ukwuu site n'aka obere ndị na-eme ihe nkiri banyere ọtụtụ ndị buuru egwu ya, na-abụ abụ na-enweghị ntụpọ.
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Ndụ Ezinụlọ
Dị ka n'oge edere, Allan Saint-Maximin emebiwo ihe banyere ezinụlọ ya n'oge gara aga maka stardom niile maka ọrụ football ya. Ndị mụrụ ya emeela mgbalị siri ike iji zere mgbasa ozi. Ndekọ nke nwunye ya, nwanne ya nwanyị na ndị ezinụlọ ya ka bụ nke zoro ezo. Eleghi anya ha nwere oge kachasi nma nke ndu ha n'ihi na otu n'ime ha bu ihe anakpo. Kurtys na-emeghị ka ọ bụrụ onye na-agba bọọlụ na-eje ozi ugbu a dị ka onye ndụmọdụ nwanne ya nwoke.
Saint-Maximin na-enwe ọ whenụ mgbe ndị otu ezi-na-ụlọ ya na-enyere ndị nọ na mkpa aka. Ị maara?… Otu n'ime ihe mbụ o mere mgbe ọ bịarutere na Tyneside bụ ịnabata ọkpụkpọ òkù na NUFC Fans Food Bank - ebe na-egosipụta ịda ogbenye na-adakwasị nnukwu ọgba aghara nke North East England. Mgbalị ndị Media mere hiwere isi n’ebe ụmụ ya nwanyị nọ; Lyana na Ninhia n'oge onyinye ha.
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - si ebi ndụ
Tomata ụdị ndụ Allan Saint-Maximin ga-enyere gị aka inweta nkọwa zuru oke banyere ụkpụrụ ibi ndụ ya.
Arnnweta ihe dị ka € 2,000,000 otu afọ na ụgwọ ọrụ kwa izu nke € 38.462 (n'oge edere) n'ezie na-eme ka ọ bụrụ onye na-egwu egwuregwu nde - ihe ngosi banyere ndu okomoko. Stylezọ maara ụdị ya na-ebi ụdị ndụ na-adọrọ adọrọ ọ dị mfe ịchọpụta sedan dara ogbenye nke dara ọnụ na $ 151,600 (ụgwọ ọnwa ya maka izu abụọ na ọkara).
Cargbọala Allan Saint-Maximin
Ọzọkwa na ndụ, yooo ma m maara Saint-Maximin nwere ezi ejiji dịka a hụrụ ya na ebe egwuru egwu. Na Nwa nwoke French bụ igwe egwu, onye hụrụ anya na-adọrọ adọrọ ma na egwu ma ama ma ama. Dị ka a hụrụ n'oge ọ bụ nwata, uwe ndị na-enye onyinye (ọkachasị isi) bụ akara mbinye aka ya kemgbe ọ bụ nwata.
Allan Saint-Maximin Ndụ ebidoghị taa. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Allan Saint-Maximin Akụkọ banyere nwata na gbakwunye akụkọ banyere ihe ndị ọzọ banyere ndụ ya - Eziokwu efu
A gwara ya ka ọ kpuchie ihe mkpuchi isi ya: Ị maara?… A kpaliri kpakpando Newcastle Allan Saint-Maximin kpuchie isi ya nke X XXX Gucci ya na STICKER n'oge mmeri megide Manchester United iji zere imebi iwu nkwado. N'ime oge ahụ, onye ọkpụkpọ ahụ dị aghụghọ nwere itinye mpempe ọcha na teepu akara Gucci.
A na-amanye Allan Saint-Maximin ikpuchi isi ya X XXX Gucci mgbe ọ na-egwu egwu na olulu. Ebe E Si Nweta Foto: TheSun
Allan Saint-Maximin's Tattoo maka Ndị Frog: inwe Egbugbu nke Superhero abụghị maka onye ofufe nwere nkụda mmụọ. Dị ya dị ka Allan Saint-Maximin ahụla ka ọ na-enweta ebe ofufe fanke. Ndi choro egwu di inwu dika nke a (nke di n’okpuru) emeghi ka ime ka ha mara ihunanya ha site n’inwe igbu egbugbu nke iru ya n’ahu ha.
Ihe nke ya Rozọ Ọ Na-adị Kwa Likebọchị Dị Ka: Allan Saint-Maximin bụ onye na-arụ ọrụ pụrụ iche iji nweta ma nọrọkwa n'ọdịdị. Thezọ ụkwụ mara mma ji arụ ọrụ na-enweghị atụ. Saint-Maximin na-ahọrọ ịlaghachi azụ ma kwado steepụ ya dịka ụzọ pụrụ iche iji mee onwe ya ka ọ dị mma.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị Allan Saint-Maximin Plus Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.
Olivier Giroud Child Story Story Ihe omuma